Bulgaria Inombolo Yefoni | Uhlu Lwezingcingo | Database lakamuva Lokuposa
Bulgaria Inombolo Yefoni
Database lakamuva Lokuposa » Bulgaria Inombolo Yefoni
Bulgaria Ucingo Izinombolo
Inombolo yocingo yaseBulgaria uhlu lwekhwalithi ephezulu yekhwalithi izoba nemininingwane ephezulu yokuxhumana yamanje etholakalayo yabantu abafakwe kudathabheki yezingcingo. Inkampani yeDatha Yokugcina Yamahhala ihlinzeka ngezinombolo zefoni zokuhlala eziholayo nayo izoba nemininingwane emkhakheni ngamunye olutholakalayo ngomkhankaso ngamunye wokukhangisa ngeselula. Thenga lolu luhla lwezinombolo zocingo lwaseBulgaria bese uthola uhlu lwakho lwefoni lwabathengi oluqondisiwe ngemininingwane ephelele.
Ukukhetha uhlu lwezinombolo zocingo lwaseBulgaria yilona oluhle kunazo zonke emkhankasweni wakho wokunikeza umsebenzi onzima ngoba kufanele ucabangele izinto eziningi, kufaka phakathi imakethe yakho eqondiwe, isabelomali, nezinjongo zokuthengisa nezinye. Futhi, ungenza noma yiluphi uhlu lwefoni yangokwezifiso nathi ngentengo yakho yokumaketha noma izindawo.
Thenga iBulgaria Consumer People Ucingo Ucingo
I-Bulgaria Consumer Ucingo Uhlu
Uhlu lwefoni yaseBulgaria Consumer luvela kuDatha Yokugcina Ye-Mailing yakamuva noma i-latestdatabase.com iqukethe imininingwane engama-40,000 ehlanganisiwe yohlu lwefoni yebhizinisi olufika ku- $ 400, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engalandelwa ngokushesha engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Database Lokugcina Lokuposa lizohlinzeka konke okudingayo ngohlu lwabathengi befoni. Uhlu lwefoni yabathengi eBulgaria lunedatha eyi-90% eqoqwe ngabasebenzi bethu ukwenza amaklayenti akho okuqondakalayo afinyeleleke kalula, azothintana ngokungasebenzi futhi angathengisa kalula. Ukwenza ibhizinisi lakho linwebeke, liguquleke futhi kube yindlela enhle yokwenza ibhizinisi lakho liphumelele kakhudlwana.
Uhlu lwefoni labathengi beBulgaria luyindlela ephumelelayo yokuxhumana nabathengi futhi lithole impendulo ngokushesha. Ukusebenzisa izinhla zefoni yebhizinisi eliqondiwe kuzokusiza ukukhulisa ibhizinisi lakho ngamathuba wokuthengisa angeziwe.
I-Bulgaria Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo